Atụmatụ aghụghọ na oku WhatsApp | Site na Linux
Atụmatụ aghụghọ na oku WhatsApp
na WhatsApp oku bụ atụmatụ ọhụrụ na-enye ohere, site na mmemme nkata, ịkpọ oku site na iji a ọnụọgụ data ma ọ bụ njikọ na netwọk Wi-Fi. Ọ malitere ịpụta na nso nso a na ngwaọrụ ụfọdụ, wee gbasaa na ndị ọrụ ndị ọzọ yana usoro ịkpọ oku, ya bụ, iji mee ka ọrụ ọkpụkpọ rụọ ọrụ na WhatsApp, ịkwesịrị ịnweta oku ma ọ bụ oku olu WhatsApp site n'aka onye enweworị ọrụ ahụ.
Otú ọ dị, ebe ọ bụ na asịrị nke ọrụ nke WhatsApp oku anọwo na mgbasa ozi ruo ọtụtụ ọnwa, ndị ọrụ enweghị ndidi gbalịrị ike ha niile iji nweta atụmatụ ahụ na igwe ha.
Atụmatụ aghụghọ na oku WhatsApp site kapeeti
E nwere ọtụtụ weebụsaịtị na isiokwu ndị na-egosi otu esi adaba ngwa a na-arụ ọrụ ịchọrọ. Ozugbo arụ ọrụ ya, a ga - ahụ ngalaba atọ (taabụ): oku, nkata na kọntaktị, ebe site na nke mbu ị ga-enwe ike idebe akụkọ banyere oku oku emere.
Ma, n'ihi ọchịchọ na-arịwanye elu nke ndị ọrụ iji nwee ike ịkpọ oku n'efu, ọtụtụ mmadụ, ma ọ bụ ndị omempụ cyber, ejirila ya mee ihe site na ịmepụta aghụghọ ọhụrụ: nke WhatsApp na-akpọ ojoro.
Ihe niile gbara gburugburu akwụkwọ ịkpọ oku. Cheta! WhatsApp Ọ ga-ezitere gị akwụkwọ ịkpọ oku n'ụzọ dị otú a, ọ ga-arụ ọrụ ahụ na akpaghị aka. Ọ gaghị agwa gị ka ị mezue nyocha, budata ngwa ndị ọzọ, ma ọ bụ gaa na ibe weebụ iji nweta ọrụ ahụ.
El hackers ozi hụ na ozugbo ị soro ntuziaka ha, ịnwere ike ịgbalite oku.
Egosipụtara na onye ọrụ na-anata ederede a na-akpọ òkù ka ọ nwalee ọrụ ịkpọ oku WhatsApp na naanị ọnọdụ nke izipụ oku na 10 ndị ọzọ.
Ozugbo i zipụrụ aghụghọ ahụ na ndị enyi 10 (n'ụzọ ezi uche dị na ya, n'amaghị ya), ha na-agwa gị ka ị pịa bọtịnụ 'n'ihu' yana nke ahụ, iji nwee ike ịgbalite ọrụ oku.
Nke a bụ ebe ịghọ aghụghọ ule bidoro! Site na ịpị bọtịnụ ahụ "Gaa n'ihu", websaịtị emepe, nke ga-eduru gị gaa nyocha. Nanị ụzọ ga-esi kwụsị ya ma were ya na ha nwetara ọrụ ha kwere nkwa bụ site na nbudata ngwa nke gụnyere ụgwọ dị elu.
Ọ bụrụ na ị daba n'ime ọnyà a, a gaghị arụ ọrụ oku ahụ n'ọnọdụ ọ bụla, onye na-agbapụ ihe ga-eme ka ị gaa na weebụsaịtị, na ibudatara ngwa akwụ ụgwọ na ọbụlagodi, n'ọnọdụ ụfọdụ, na a malware nke ahụ nwere ike imebi emebi na ama gị, enweghị ike ịgbanwe agbanwe. N'agbanyeghị nke ahụ, nke kachasị njọ ga-abụ ịnweta data nzuzo gị niile, site na foto na vidiyo, mkparịta ụka na okwuntughe, ma maka akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta na kaadị akwụmụgwọ.
Ọ bụrụ n ’ịnata ozi n’aka enyi gị ihe gosipụtara gị:
Hey, m na-akpọ gị òkù ka ị nwaa WHatsApp oku. Pịa ebe a iji rụọ ọrụ ha: http://WhatsappCalling.com
Adala! Nanị eleghara ya anya, ma zigara ya onye ọzọ. Ọ dịkwa mma hichapụ ozi kpọmkwem iji zere ịpị ya na mberede na ọdịnihu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka ịnweta ekwentị gị.
Ihe kachasị mma n'okwu ndị a bụ itinye ezi uche:
WhatsApp agaghị ezitere gị ozi karịsịa. Ọ ga-arụ ọrụ ahụ na akpaghị aka.
Na agbanyeghị na m ga-akwụ gị ụgwọ maka nbudata, pere mpe iji mezue nyocha.
Ọ nweghị enyi ga-ezitere gị njikọ nwere ọnọdụ nke ibugharị ya na mmadụ 10, belụsọ na ọ bụ spam ma ọ bụ nje.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Atụmatụ aghụghọ na oku WhatsApp
Have ga-akpachara anya maka aghụghọ site na WhatsApp na ụzọ ọ bụla ọzọ, ndị maara ihe, ndị na-eme ihe ike na ndị enyi iji nweta ego ngwa ngwa ma dị mfe site na aghụghọ na iduhie ndị mmadụ mara ha niile, ugbu a enwere otu ihe dị egwu nke ọ na-ata oke. Ndị mmadụ n'amaghị ama denye aha na ọrụ sms adịchaghị elu ma nata ụgwọ dị oke elu, ana m ahapụ njikọ ahụ ka ị wee hụ ya ma kpachara anya n'ihi na ọ na-agbasawanye nke ukwuu: http://www.adescargarwhatsapp.com/usan-emoticonos-para-robar-informacion-en-whatsapp/
Social ERP rutere ụwa Open Source ekele maka LibertyaERP